I-Elafibranor (GFT505) Powder-The New Drug for NASH Study Study
Yintoni iElafibranor (GFT505)?
I-Elafibranor (GFT505) powder (923978-27-2), sisiyobisi esilingwayo esisaqhubeka nophando. Ngokuyintloko, ukufundwa kwayo kunye nophuhliso lweGenfit lusekwe ekusebenzeni kwe- I-Elafibranor (GFT505) powder (I-923978-27-2) ekulweni nezifo ezifana nesibindi esinamafutha angenasiselo sinxilisayo, idyslipidemia, ukumelana ne-insulin, kunye neswekile.
Indlela yokusebenza ye-Elafibranor (GFT505)
I-Elafibranor (GFT505) ipowder yonyango lomlomo olusebenza kwii-subtypes ezintathu ze-PPAR. Babandakanya i-PPARa, i-PPARd, kunye ne-PPARg. Nangona kunjalo, isebenza ikakhulu kwi-PPARa.
Inkqubo ye-Elafibranor yesenzo inzima njengoko ichola ngokwahlukeneyo ii-cofactors kwi-receptor yenyukliya. Ngenxa yoko, oku kukhokelela kulawulo lokwahluka kofuzo kunye nefuthe lebhayiloji.
I-Elafibranor (GFT505) ipowder iyakwazi ukuchonga kunye nokuchaza iprofayili yenyukliya modulator (SNuRMs) ekhethiweyo. Ngenxa yoko, inika ukusebenza okuphuculweyo kunye neziphumo ebezingalindelekanga ezincitshisiweyo.
Zombini iimolekyuli ze-multimodal kunye ne-pluripotent ziye zibonakalise ukuba ziyasebenza ekulweni iimeko ezahlukeneyo. Babandakanya ukumelana ne-insulin kunye neswekile, ukuvuvukala, ukutyeba kakhulu, kunye ne-lipid triad, ephawuleka ngokunyuka kwe-cholesterol ye-HDL kunye nokwehliswa kwe-cholesterol ye-LDL kunye ne-triglycerides.
Umahluko phakathi kwendlela yokusebenza kwe-Elafibranor kunye nezinye izinto ezijolise kwii-PPAR kwi-NASH (non-alcohol alcohol steatohepatitis) yinto yokuba ayibonisi msebenzi we-PPARy.
Nje ngeziphumo, Elafibranor Abasebenzisi abafumani ziphumo ebezingalindelekanga ezinxulumene nokusebenza kwe-PPARy. Iziphumo ebezingalindelekanga zibandakanya; ukugcinwa kwamanzi, i-edema, kunye nobunzima bokufumana ubunzima obukhulisa umngcipheko umntu ekubandezelekeni kwentliziyo.
I-Elafibranor (GFT505) yesifundo sonyango sika-Nash
I-NASH (nonalcoholic steatohepatitis) sisifo sesibindi esikhokelela kukudumba kunye nokudodobala kweehepatocytes kunye nokufumba kwamafutha ekwabizwa ngokuba ngamathontsi eepidid. Ngokwesiqhelo, iimeko ezithile zempilo ezinje ngesifo se-metabolic syndrome, uhlobo lwesibini lweswekile, kunye nokutyeba kakhulu ngoyena nobangela wesifo se-steatohepatitis (NASH) esinganyanzelekanga, kunye nesifo sesibindi esinamafutha (NAFLD).
Namhlanje, abantu abaninzi banesi sifo esibulalayo. Icandelo elothusayo malunga nalo kukuba kungakhokelela kwisifo sokuqina kwesibindi, imeko esenza isibindi singakwazi ukusebenza. Inokuqhubela phambili nomhlaza wesibindi kwaye kwezinye iimeko, ibangela ukufa.
Iindaba ezibuhlungu malunga ne-NASH (nonalcoholic steatohepatitis) kukuba ayikhethi budala kwaye iyaqhubeka ichaphazela wonke umntu. Okubi nangakumbi kukuba, iimpawu zesifo zinokungangqinelani, kwaye umntu ngekhe azi ukuba banengxaki yesi sifo de siqhubele phambili.
Ukuqhekeka kunye nosulelo oluziswe yi-NASH (i-non-alcoholic steatohepatitis) kunokubangela iingxaki zentliziyo kunye nemiphunga. Ngabantu abaninzi ngoku abanengxaki yale meko evela kwisifo esingenamafutha sesibindi, abaphandi bafuna unyango ngaphandle kokufakwa kwesibindi.
Elinye lala machiza afundelwa unyango lwe-NASH yi-Elafibranor (GFT505) powder (923978-27-2). Ukuza kuthi ga ngoku, ibonisile ukuba ibangela iimpembelelo ezilungileyo kwiimpawu ezimbini eziphambili zesifo, oko kukuthi, ukuhla kwebala nokuvuvukala. Ubuhle kunye nayo kukuba kuyanyamezeleka kwaye ayifane yenze umntu ahlupheke ngayo nayiphi na imiphumo. Kungenxa yesi sizathu ukuba iU.S. Food and Drug Administration inike umkhombandlela wegama ngokukhawuleza Unyango lwe-NASH.
Okwangoku, i-Elafibranor (GFT505) ipowder ikwiSigaba 3 solingo lweklinikhi, ekwabizwa ngokuba yi-RESOLVE IT.
Sisifundo sehlabathi esiqale kwikota yokuqala yowama-2016, esilawulwa ngokungahleliwe, esilawulwa yi-placebo kumlinganiselo wesi-2: 1 nesiphofu esingaboniyo kabini. Izigulana ezichaphazelekayo kolu phononongo ngabo banengxaki ye-NASH (NAS> = 4) kunye ne-fibrosis (F2 okanye i-F3 zigaba apho umonakalo wesibindi sele uphawuleka.Kulo lonke uphononongo, abaguli baya kwenziwa nge-Elafibranor (GFT505) I-120mg okanye i-placebo kanye yonke imihla.
Izigulana eziliwaka zokuqala eziza kubhaliswa ziya kunceda ukubonisa ukuba i-NASH iyanyangeka nge-Elafibranor (GFT505) ngaphandle kokuqaqambisa i-fibrosis xa kuthelekiswa nezo ziphathwe nge-placebo.
I-cohort yokuqala yabhaliswa ngo-Epreli ngo-2018, kwaye uhlalutyo lweziphumo luya kuxelwa emva konyaka ka-2019. Idatha echaziweyo iyakucacisa ukuba i-Elafibranor ivunywa yi-US Food and Drug Administration njengoko ifumana imvume kwi-Arhente yaMayeza aseYurophu, yaziwa ngokuba yi-EMA ngo-2020.
Uphononongo luye lwaya phambili ngoDisemba ngo-2018 xa iBhodi yoLawulo loKhuseleko lweDatha (i-DSMB) ixhasa ukuqhubeka kwelingo ngaphandle kotshintsho. Oko kwakungemva kophononongo olwacwangciswa kwangaphambili kwidatha yokhuseleko olwenziwe emva kweenyanga ezingamashumi amathathu.
Iziphumo zesikolo sangaphambi kokuqala kunye nezifundo zeklinikhi kunyango lwe-NASH
Ukusebenza kunye nokukhuseleka kwe-Elafibranor kunyango lwe-NASH kuvavanyiwe kwixesha elidlulileyo ngeendlela ezininzi zezifo. Kwinqanaba le-5a le-2a, kwenziwa izilingo ezahlukeneyo kwizigulana ezahlukeneyo ezinesifo se-metabolic. Kubandakanya abo bane-2 yeswekile okanye i-pre-diabetes kunye ne-atherogenic dyslipidemia. Ngexesha lofundo, kwaqwalaselwa ukuba u-Elafibranor unyusile;
Ukuncitshiswa komngcipheko wokubandezeleka kwimicimbi yentliziyo
Ukucitshiswa kweempawu zokulimala kwesibindi
Iipropathi ezichasene nokuvuvukala
Ukunyuka kokuziva kwe-insulin
Iprofayile ye-lipidoprotective lipid.
Uvavanyo lwesigaba 2b olwaqaliswa ngo-2012 lolona vavanyo longenelelo lukhulu kunye nolona luhlobo lokuqala lokufunda olwenziwe kwi-NASH. Kulapho u-Elafibranor afumana umbono ophakanyisiweyo we-FDA wokupheliswa kwesigqibo se-NASH ngaphandle kokuya nokuba mandundu kwe-Fibrosis.
Kwaqatshelwa ukuba abaguli abafumene unyango lwe-NASH kunye no-Elafibranor baqaphela ukuphuculwa kweempawu zesibindi ezinje nge-ALP, GGT, kunye ne-ALT. Ngokuvavanywa kokuphela kwesibini, kwabonwa ukuba i-Elafibranor (GFT505) yedosi ye-120mg inike iziphumo zonyango kumngcipheko we-cardiometabolic ohambelana ne-NASH, zibandakanyiwe;
Iziphumo ezichasene nokuvuvukala
Ukuphuculwa kokuziva kwe-insulin kunye ne-glucose metabolism kwizigulana ezinesifo seswekile
Ukuphucula amanqanaba e-lipoproteins kunye neeplasma lipids.
Ukusebenza kwe-Elafibranor kunyango lwe-NASH yabantwana
Umgangatho apho abantwana babandezeleka ngenxa yokukhuluphala inyuke kakhulu, iyenza inkxalabo yezempilo. Kuphando olwenziwe ngo-2016, kwajongwa ukuba NAFLD(isifo esinesibindi esinamafutha) sinesifo malunga ne-10-20% yabantwana. Ikwabonakalise ukuba i-NAFLD yabantwana iya kuba sesona sizathu siphambili sokusilela kwesibindi, isifo sesibindi, kunye nokufakwa kwesibindi ebantwaneni nakwishumi elivisayo.
NgoJanuwari 2018 kwabakho ukumiliselwa ngokusesikweni kwenkqubo yabantwana ye-NASH isazi ukuba i-Elafibranor lelona chiza libonakalise ukuba liyasebenza kunyango lwe-NASH kubantu abadala kwaye bakwinqanaba lokukhula kunyango lwabantwana.
Ngaba i-Elafibranor ingasetyenziswa kunye namanye amachiza kunyango lwe-NASH?
Sele kucacile ukuba i-Elafibranor iyasebenza kunyango lwe-NASH xa isetyenziswa yodwa. Nangona kunjalo, ngenxa yokuntsonkotha kokugula, inokusetyenziswa kunye namanye amachiza kulawulo lwe-fibrosis yesibindi, i-NASH, kunye ne-co-morbidities yazo.
I-Elafibranor (GFT505) ezinye izixhobo
Kunyango wesifo se-cholstasis
I-cholestasis yimeko ebangelwa kukuphazamiseka ekwakheni i-bile kunye nokuhamba kwayo kwi-gallbladder kunye ne-duodenum. Ingakhokelela ekonyukeni kwesifo se-systemic kunye nesifo sesibindi, ukusilela kwesibindi, kunye nemfuno yokufakwa kwesibindi. Uphononongo lweklinikhi olwenziwe lwabonisa ukuba i-Elafibranor (GFT505) ipowder inciphisa amanqaku e-biochemical kwi-plasma yiyo loo nto ingqina ukuba inokuba luncedo kunyango lwe-cholestasis.
Iswekile yimeko ebangelwa kukuba neswekile eninzi okanye iswekile egazini. Ichaphazela phantse amakhulu amane ezigidi zabantu kwihlabathi liphela. Umntu uphuhlisa uhlobo lweswekile yesibini xa imizimba yabo ingakwazi ukuvelisa kwaye isebenzise i-insulin ngokwesiqhelo.
Uphando olwenziwe kwi-elafibranor lubonisa ukuba kunciphisa ukuqhubela phambili kohlobo lwe-2 yeswekile ngeendlela ezimbini. Eyokuqala kukuphucula i-glucose metabolism emzimbeni.
Ikwaphucula ubuntununtunu be-insulin kwezihlunu nakwizihlunu zomzimba.
Isifundo se-Elafibranor siza njengeendaba ezimnandi kuye nakubani na ophethwe yi-NASH. Ukuba sele ulawulwe ngomlomo kwizigulana ezingaphezulu kwamakhulu asibhozo ukuza kuthi ga ngoku kwaye ubonakalisa ukuba ziluncedo, kukho ithemba lokuba abantu abasayi kuphinda benze utyando lwesibindi.
Kwakungekho Ukuhlangana kweziyobisi ze-Elafibranor ifunyenwe nge-sitagliptin, simvastatin, okanye warfarin, ebonisa ukuba inokusetyenziswa kunye namanye amayeza ngokukhuselekileyo. I-Elafibranor iyanyamezeleka emzimbeni kwaye ayibonisi naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga.
Iindlela zoPhando zokuGuqulela kwisifo seswekile, ukukhuluphala, kunye neNonalcoholic Fatty, ehlelwe nguAndrew J. Krentz, uChristian Weyer, uMarcus Hompesch, uSpringer weSimo, iphepha 261
Ii-PPARs kwiCellular kunye ne-umzimba wonke weMetabolism ehlelwe nguWalter Wahli, uRachel Tee, 457-470
Ukutyeba kakhulu kunye neGastroenterology, umba weKliniki ye-Gastroenterology yaseNyakatho, i-Octavia Pickett-Blakely, uLinda A. Lee, iphepha 1414-1420
1. Yintoni i-Elafibranor (GFT505)?
2.Elafibranor (GFT505) indlela yokusebenza
3.Elafibranor (GFT505) yesifundo sonyango seNash
5. Iziphumo zesifundo sangaphambi kokubeleka kunye nonyango kunyango lwe-NASH
6.Ukusebenza kwe-Elafibranor kunyango lwe-NASH yabantwana
7.Ingaba i-Elafibranor ingasetyenziswa kunye namanye amachiza kunyango lwe-NASH?
8.Elafibranor (GFT505) ezinye izinto ezisetyenziswayo
Agasti 26, 2020